Prepaid yemagetsi magetsi metres Vagadziri - China Prepaid yemagetsi magetsi metres Suppliers, Fekitori
Dhata rekuwana dhata
Din njanji yemagetsi magetsi mita
3Phase 4wire simba mamita
3Phase 4wire energy metres (ic kadhi)
3Phase 4wire simba mamita （kure）
Din njanji imwe chete yesimba simba mita
Imwe chete phase din njanji simba mita （dormitory）
Imwe chikamu din njanji simba mita （ic kadhi)
Danho rimwechete rejanji simba remamita （kure）
Yakamikidzwa yakawanda-inoshanda magetsi emagetsi metres
Matanho matatu lcd yakadzamidzirwa padhijitari inoratidzira akawanda-anoshanda magetsi emagetsi metres ine rs485
Magetsi mashandiro emagetsi ekutarisa terminal (gprs.lora)
Magetsi mashandiro emagetsi ekutarisa terminal (4 chiteshi)
Multifunction emagetsi mita
Imwe-chikamu chakawanda-chinoshanda magetsi emagetsi metres
Imwe-chikamu chakareruka yakawanda-inoshanda magetsi emagetsi metres
Matatu-chikamu akawanda-anoshanda emagetsi simba mita
Prepaid zvemagetsi simba mita
3Phase 4wire prepaid simba mita (ic kadhi)
3Phase 4wire prepaid simba mita (kure)
3Phase prepaid simba mita (ic kadhi)
Imwe chete chikamu chemagetsi magetsi mita （ic kadhi + module）
Imwe chete chikamu chemagetsi magetsi mita （ic kadhi）
Imwe chete chikamu chemagetsi mita （kure + module）
Imwe chete chikamu chesimba mita （kure）
Imwe chete chikamu chepashure yemagetsi mita （ic kadhi）
Imwe chikamu chemagetsi magetsi mita
Matanho matatu emagetsi simba mita
Matanho matatu emagetsi emagetsi mita （inotakura, lora, gprs）
Ikadhi kadhi pre-yakabhadharwa mvura mita ic
Smart kure kwemamita emamita
Danho rimwe remagetsi ...
Chikamu chetatu chemagetsi ...
Imwe-chikamu chakareruka-akawanda ...
Simba remagetsi rinoshanda ...
Matanho matatu LCD yakadzamidzirwa di ...
Din njanji imwe chete phase simba ...
3phase 4wire energy metres (kure) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nehunyanzvi hwekugadziriswa kwe GB / T17215.321-2008 uye GB / T17215.323-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
3phase 4wire prepaid energy metres (IC kadhi) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nehunyanzvi hwekutsanangurwa kwe GB / T17215.321-2008 uye GB / T17215.323-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-phase prepaid energy metres (IC kadhi) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hwekutarisirwa GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-chikamu chemagetsi magetsi metres (kure) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hwekutarisirwa GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-chikamu chemagetsi magetsi metres (kure + + module) chitsva chesimba rekuyera simba rakagadziriswa uye rakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hwekutarisirwa GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-chikamu chemagetsi magetsi mita (IC kadhi) chinhu chitsva chesimba kuyerwa chigadzirwa chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu sekuenderana nehunyanzvi hwenyaya dze GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-chikamu chemagetsi magetsi mita (IC kadhi + module) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hwekutsanangurwa kwe GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
3phase simba mita (IC kadhi) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nehunyanzvi hwekugadziriswa kwe GB / T17215.301-2007, DL / T614-2007 uye DL / T645-2007. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Nha. 256, Xincheng Road, Huankeyuan, Yixing, Wuxi, Jiangsu, China
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu, ndapota siya e-mail yako kwatiri uye utitane nesu mukati memaawa makumi maviri nemana.